AndroBox - Fialam-boly an-trano feno fahendrena
Alao ny vidinao mora eto:
Posted in Boaty Android, hevitra, Video2 Comments
NVIDIA SHIELD TV | Streaming Media Player miaraka amin'ny Remote & Game Controller
Mankanesa ao amin'ny Amazon NVIDIA SHIELD TV
Fiainana mifandray amin'i Google - Akory ny atiny Google rehetra sy ny endri-javatra matotra ao amin'ny Google Assistant, zarao amin'ny GoogleK ny sarinao amin'ny 4K, ary ampidino amin'ny fahitalavitra amin'ny Chromecast 4K anao ny fampiharana ankafizinao.
4K HDR Powerhouse - Jereo ny horonantsary Netflix sy Amazon amin'ny 4K HDR mazava, sy YouTube, Google Play Film & TV, ary VUDU ao amin'ny 4K. Ny fampiharana toa ny HBO Now, Spotify, ary ny ESPN dia mahafeno ny filanao fialamboly rehetra.
Lalao NVIDIA-Powered - Manotraka lalao avy amin'ny alàlan'ny PC-nao-Geforce amin'ny telefaona mankany amin'ny fahitalavitra amin'ny 4K HDR amin'ny 60 FPS. Makà milalao rahona vita amin'ny NVIDIA-mahery miaraka amin'ny GeForce NGAYON. Ary ankafizo ny lalao Android tokana amin'ny SHIELD.
Vonona Smart Home - Avelan'ny Google hanampy anao hifehy ny fialamboly sy ny trano malefaka amin'ny feonao ianao. Ampio ny SmartThings Rohy mampifandray an-jotra tsy misy mpampita, mpandahateny, thermostat, sy ny maro hafa.
Posted in Boaty Android, hevitra, VideoTagged androbox, boaty android, nvidia, Nvidia Shield TV3 Comments
GearBest Fandraisana TV Xiaomi Mi
Posted in Boaty Android, hevitra, VideoTagged androbox, boaty android, Xiaomi MiLeave a comment
Mocute 054 blapé bluetooth takelaka Wireless lalao Handle Controller
Ento ny vidinao mora eto Mocute 054
Posted in Accessories, hevitra, VideoTagged Bluetooth, maso, Lalao Handle, Wireless, Xiaomi Mi, Xiaomi Mi Wireless Bluetooth Lalao Lalao Handle ControllerLeave a comment
Yoka TV KB2 PRO Famerenana feno
Avelao ho mora eto ny boaty
Posted in Boaty Android, hevitra, Video3 Comments
H96 Pro Plus Famerenana feno
Avelao ho mora eto ny boaty H96 Pro +
Posted in Boaty Android, hevitra, VideoLeave a comment
Air Mouse 3 amin'ny 1
Alao eto ny Air Mouse mora anao AirMouse
Posted in Accessories, hevitra, Video1 Comment
Revolisiona fialam-boly tsara kokoa
Inona no ataon'ny Android Box?
Araka ny tondroin'ny anarany, Android Box dia mifototra amin'ilay rindrambaiko Android mitovy hita amin'ny telefaona finday, fa kosa niasa hiasa amin'ny fitaovana mandeha amin'ny fahitalavitra.
Ny Android Box dia mahatonga ny televiziona ho marani-tsaina kokoa noho ny marani-tsaina, toy ny fampifangaroana telefaona finday tsara indrindra na takelaka amin'ny steroid amin'ny fahitalavitra efijery lehibe na efijery Projector sy karazana fanaraha-maso lavitra toy ny totozy, fitendry, totozy Gyro, mpanara-maso lalao, lavitra TV mahazatra sns. mba hahazoana ny traikefa fampiasa amin'ny fialamboly tsara indrindra amin'ny ho avy. Tsy mila PC na Game Box lafo vidy intsony ianao raha te hanana fialamboly tsara indrindra. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny Android Box dia ny safidy hametrahana fampiharana Google Play sy Kodi.
Amin'ny Kodi dia azonao atao ny mijery ny zava-drehetra maimaim-poana sy tsy misy famandrihana toy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra, sarimihetsika, fantsom-pahitalavitra mivantana, Torrents, Youtube sns…
Miaraka amin'ny fivarotana Google Play dia afaka mametraka ny kilalao Android rehetra ianao ary milalao ao amin'ny fahitalanao izany amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso lalao rehetra, fitendry na totozy. Na azonao atao ny mampiasa ny Miracast fitaratra handokoana ny efijery ary milalao lalao rehetra avy amin'ny telefaona eo amin'ny efijery lehibe amin'ny alàlan'ny telefaona anao ho toy ny fanaraha-maso.
Azonao atao ny mametraka fampiharana IP Tv raha hijery fahitalavitra mivantana, na mampiasa Netflix
Ary koa ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika, mamela anao hilalao lalao, tahaka ny PlayStation TV sy ny Amazon Fire TV. Miankina amin'ny Google Play Store ny Android TV mba hitondrana votoaty, fa ny fikarohana kosa dia hikambana amin'ny serivisy fidirana an-tselatra toa an'i Netflix rehefa misy ifandraisany.
Raha manana Netflix ianao, Blinkbox na Prime Instant Video napetraka ao amin'ny Android TV ary mangataka azy ianao hitady ireo sarimihetsika napetraky ny Cate Blanchett, ny tele amin'ny fahitalavitra Android dia tokony hizaha ireo rehetra hahita izay misy.
Mazava ho azy fa ho afaka hijery fahita TV tsy tapaka ianao, raha manidina ny sambonao.
Toa an'i Chromecast, ny Android TV dia mitombo avo roa heny toy ny streamer miaraka amin'ny endri-javatra Cast. Noho izany ny mpampiasa dia afaka mahita votoaty ao amin'ny mobiles na ny browser Chrome ary aparitaka amin'ny tele amin'ny fahitalavitra Android izy ireo, tsy misy ahiahy.
Posted in Boaty Android3 Comments
Airmouse 4 amin'ny 1 lavitra T6 $21.11